Facebook ကြိုက်တဲ့ သူခိုး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Facebook ကြိုက်တဲ့ သူခိုး…
Facebook ကြိုက်တဲ့ သူခိုး…
Posted by ကို ထွဋ် on Jun 25, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle |6comments
မင်နက်ဆိုတာပြည်နယ်တွင် နေထိုင်သူ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ၎င်း ဖောက်ထွင်းခဲ့သည့် အိမ်တွင် Facebook အသုံးပြုပြီး log out မလုပ်ခဲ့သောကြောင့် ရဲအဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
နီကိုလပ်စ်ဝစ်ခ်ျဟုခေါ်သည့် ဖောက်ထွင်းရေးသမားသည် ဇွန်လ ၁၉ ရက်က စိန့်ပေါလ်တောင်ဘက်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် ဖောက်ထွင်းမှုတစ်ရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းနေအိမ်ရှိ ကွန်ပျူတာတွင် Facebook အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော်လည်း log out ပြုလုပ်ရန် မေ့လျော့သွားခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
– See more at: http://www.myanmarinternetjournal.com/content/13280#sthash.ERuvNWP3.dpuf
အော်. . . ဒီသခိုးနှယ်. . .
ကျနော်ကွန်ပြူတာဖွင့်ထားပြီး log out မလုပ်ခဲ့လို့ ..
စိတ်ပုတ်တတ်တဲ့ တစ်ယောက်က ကျနော် Fri တွေထဲက တချို့ ကို Block သွားတာခံလိုက်ရတယ်
ကျနော် တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားတယ်… ဒါပေမယ့်လည်း…. ကိုယ်ကပဲ ပြန်တောင်းလိုက်ရတယ်..
သူBlock သွားတဲ့အထဲမှာ မိန်းခလေးFriတွေပါမသွားလို့ တော်သေးရဲ့
အနော် ဒါကြောင့်ဆိုင်မှာ သိပ်မသုံးရဲတာ အဲဒါတွေလည်း ပါတယ်
တော်တော် အ တဲ့သူခိုးပေါ့
ဟုတ်.. ဇီဇီ.. ကျွန်တော်က အွန်လိုင်းတက်တုန်းလေး ပို့စ်တင်ရလို့ပါ… ချောတီး…